Archive du 13-nov-2020
Barea .. Nampiray ny Malagasy manerantany
Niverina niara-niaina ny "rivotra" Barea indray ny malagasy rehetra maneran-tany omaly nandritra ny fihaonan'ny Barea tamin'ny Elefantan'i Côte d'Ivoire.
Manala ny parasin-tsaka sy alika
Zavatra iray tena mahakamo rehefa miompy saka na alika ao an-trano ny parasy ho entiny izay mety hifindra aminny olona. Ankoatra ny fampandroana azy sy ny fibangoana ny volony dia fikafika kely ireto azo hanalana izany.
koloy ny tongotra
Fotoana fanaovana kapakapa sy kiraro mampiseho tongotra ny andro mafana toy izao.
Ny atao mba hanana charisme
Iriana ve ny ho lehilahy hataonny hafa ho maodely sady hajainny olona? Azo lazaina ho tsotra ihany ny fomba hahatongavana aminizany. Ireto avy no tokony hatao .
Efa niteraka iray ny olona miaraka amiko. Mifankatia izahay fa ny reniko no tsy manaiky ahy hiditra aminy. Ahoana no ataoko fa izy tena tiako?
Matoa ny reninao mandrara ny fiarahanareo, dia misy antony ao. Malahelo koa izy, noho ianao miaraka aminolona efa niteraka, nefa tsy izay ny ho avy niriany ho anao.
« Oeuf en gelée »
Akora ilaina · Atody 4 · « Gélatine » raviny 2 · Vinaingitra 2 sf · Divay 1 sf · Nofonakoho sy feny · Vovoka sakay 1 tsongo
Redevenu en vogue depuis quelques temps, le phénomène du mini-moi na jamais été oublié mais cest juste estompé.
Princio : Namoaka hira miaraka aminny zanany vavy
Namoaka hira vaovao sady miavaka aminny hira efa fanaony hatraminizay i Princio omaly, tao anaty tambazotra sosialy Facebook.
Papay lahy : Manasitrana hemorroides
Ho anireo tao anatinny fitsabaona nentim-paharazana, dia zava-dehibe mihitsy ny fahaizana manavaka ireo zava-maniry, sy ny mijery ny aretina sitraniny.
Shopping « Bijoux »
1. Bracelet onyx  il de tigre  sélénite  Page Facebook « Orvonika Hjt » - Contact  034 18 035 83
Tantely + tongolo gasy + sakamalaho + vinaingitra : Mahasolo fanafody
Azo hitsaboana ny aretina maro ny tantely, tongolo gasy, sakamalaho ary vinaingitra paoma. Dokotera iray ao Sina, antsoina hoe :
Mialy Rajoelina, Denise,
: niara-nanentana ankizy momba ny fanolanana
Nisesisesy tato ho ato ny trangana fanolanana zaza tsy ampy taona. Raha araka ny tarehimarika azo avy aminny Centre Vonjy miisa 6 aminireo 22 isam-paritra dia, mahatratra 925 isa ireo ankizy sy zaza tsy ampy taona niharanny fanolanana tato anatinny 11 volana monja.
Eau Vive 50 taona Hisy lalao maro ho anny mpanjifa
50 taona izay no nisianny rano fisotro Eau Vive sy niarahany niriaria taminny mpanjifany. Hisy fankalazana maro manodidina izany faha-50 taona izany, izay natomboka taminny
Ady aminny Covid-19 Mitohy ny fampitaovana isa-paritra
Mitohy hatrany ny ady aminny Covid-19, izay iarahana aminny Ministeranny Fahasalamam-bahoaka. Nanomboka taminity herinandro ity indray ny fanaterana ireo fitaovana ara-pahasalamana any aminny Faritra sy Distrika ara-pahasalamana maro manerana ani Madagasikara toy ny faritra Diana, Sofia, Sava, Boeny,
Ady aminny doro tanety Hiha-henjana ny sazy
Anisanny noresahana nandritra ny tatitry ny Filan-kevitra ny alarobia teo ny mahakasika ny doro tanety izay mihamahazo vahana tato ho ato. Tapaka nandritra izany fihaonana izany fa hihamafy kokoa ny fampiharana ny sazy ho anireo izay manao izany.
izao ny olona vao sahy mitoroka Hoy i Aina Randriambelo
Nanao tohivakana tato ho ato ny vaovao mahakasika ny fanolanana. Saika ho isanandro mihitsy izany ka saika napetra-panontaniana ny rehetra.
Ankadindramamy Ambohidahy Aminny 1 ora maraina no milaha-drano
Mifoha aminny 1 ora maraina ny mponina ao Ankadindramamy Ambohidahy, mba hatsaka rano any aminny paompy, na mameno bidon sy siò ao an-trano.
Covid-19 any Atsinanana Notsidihinny minisitera ireo marary
Tonga nitsidika ireo mararinny covid-19 any aminny faritra Atsinanana ny minisiteranny fahasalamam-bahoaka, izay notarihinny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis.
Cheffe Aina Ramadison Hisolo tena antsika aminny Best Chef Afrika
Aminny volana janoary aminny taona ho avy no hanomboka ny fifaninanana Best Chef Afrika.
BETAFO 4 sm ny haavonny avandra
Potiky ny avandra avokoa ny voly avotra any aminny distrikani Betafo. Nahatratra 4 cm ny haavonny avandra nilatsaka ny 05 Novambra lasa teo izay tsy namotika fotsiny ireo fambolena fa mbola nanimba ny lalana
Bodo Hiantsehatra, hanao live painting
Mpanakanto 3 samy manana ny maha izy azy no hiantsehatra ao aminny Havoana Land Imerinkasinina aminny 28 novambra takariva ho avy izao. Isanizany i Stephan,
Fampahafantarana ani Madagasikara Hatao aminny horontsary sy boky
Ho fampahafantarana ani Madagasikara sy ny faritra Boeny aminny alàlanny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto aminny faritra dia hisy ny fiaraha-miasan-dRtoa Sung Hwasue, Mpanolotsaina sady Masoivohom-paritra,
Tovovavy 6 ao aminny akany Faravohitra Horaisina an-tanana ny fianarany
Mitohy hatrany ny fanampiana ara-tsôsialy hataonny fikambanana REAL-InDEFi, hanamafisana ny fanabeazana ny tovovavy sy ny vehivavy.
TSENABENNY FIZAHANTANY Natao hisarihana antsika Malagasy
Anisanny sehatra iray azo lazaina efa niala aina mihitsy ny sehatry ny fizahantany teto amintsika vokatry ny fiparitahanny valanaretina COVID 19.